Ahoana ny fomba hamoronana GIF mihetsika amin'ny Photoshop haingana sy mora | Famoronana an-tserasera
Ahoana no mamorona a GIF animated in Photoshop haingana sy mora dia tsy olana intsony misaotra Photoshop, ilay fitaovana famerenana sary tsy azo ovaina, saingy fantatrao ve fa afaka mamorona ianao GIF amin'ny Photoshop haingana be ve? ao anatin'ny vitsivitsy monja 10 minitra arakaraka ny fahasarotan'ny sarimiaina no ahafahanao mamorona mahafinaritra GIF an-dalana handeha hampiasa izay tianao. Tena intuitive ary amin'ny dingana vitsy dia vitsy Photoshop mamela antsika miasa miaraka amin'ny hetsika miaraka amin'izay ataontsika amin'ny famerenana sary.
Ilay tokana izay ilainao manao a GIF animated in Photoshop es tadiavo ilay hevitra hoe ahoana no tianao hanaovana ny sarimiaina ary manomana ny sary ilaina rehetra hamoronana ny sarimiaina. Ity karazana sarimiaina ity dia miorina amin'ny frame mba hamoronana hetsika tena mitovy amin'ny Adobe Mampiteraka. Photoshop mamela antsika hanafina sy hamela ireo bika hita maso hanombohana mamorona hetsika. Amin'ity karazana sary mihetsika ity dia hetsika iray ny sary tsirairay, noho izany dia mila manova ireo zavatra eo amin'ny sosona isika isaky ny te-hamorona hetsika isika. Mora, haingana ary tena intuitive.
Amin'ity tranga ity dia hanao a isika GIF manjelanjelatra izay hisolo ny fahitana azy ny kisary iray, dia hanampy font koa izahay avy eo.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mamoaka ny sary mihetsika, noho izany dia mankany amin'ny kiheba isika varavarankely / fandaharam-potoana de Photoshop. Efa hitanay ny fandaharam-potoana tamin'ny programa Adobe hafa: selan'izy, Premiere, taorian'ny Effects ary ny karazana fandaharana rehetra manova horonantsary na sarimiaina.
Vantany vao vonona ny fandaharam-potoananay, dia hanomboka izay hataontsika mamorona frame. Ny zana-kazo tsirairay raha mijery akaiky ny any ambany isika dia misy kisary misy fametahana fotoana, ity takelaka ity dia hanamarika ny faharetan'io frame io. Ny hevitra momba ny sarimiaina dia mihodina eo anelanelan'ny soson'ireo sarinay sy ny faharetan'ireo frame ireo, ny boaty tsirairay dia mihetsika (mitsambikina amin'ity tranga ity) rehefa manodina ny sosona fahitana kisary isika. Raha fintinina, ny tokony hataontsika dia toggle frame miaraka amin'ny kisary ary iray hafa tsy misy kisary, amin'ity fomba ity dia hiseho ara-maso fa manjelanjelatra izy.
Raha mijery ny sary etsy ambony isika dia mahita ny fomba fanodikodinan'ny maso ny kisary, ka hahatratrarana ny effet flicker. Toy izany koa no mitranga amin'ny typografika, azontsika atao ny mifandimby ny fivezivezeny amin'ny fomba rehetra azo atao: ny habeny, ny lokony, ny endriny ... mety hisy ny mety raha mbola mifandimby eo amin'ny zana-kazo tsirairay isika.
El ora isaky ny frame Hiankina amin'ny zavatra tadiavintsika amin'ny antsika io GIFRaha mila hafainganam-pandeha bebe kokoa isika dia hanome fotoana kely kokoa ho an'ny frame tsirairay, etsy ankilany raha tsy mila hafainganana isika dia hanome fotoana bebe kokoa ho an'ny frame tsirairay.
Ny dingana farany dia misy fanondranana ny GIF, noho izany dia mankany amin'ny menio fisie izahay Photoshop ary mifidy ny safidy hanondranana tranonkala izahay.
Tao anatin'ny fotoana fohy dia afaka namorona a GIF fampiasana sary mihetsika Photoshop, fitaovana ankafizinay indrindra ho an'izay rehetra tia famolavolana sy sary. Aza hadino fa ny hany fetra amin'ny famoronana na inona na inona dia ny eritreritsika manokana. Mamorona karazana isan-karazany GIF ary manaova fanazaran-tena tsy mijanona mandra-pahafatinao tsara ilay teknika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny fomba hamoronana GIF mihetsika ao amin'ny Photoshop haingana sy mora
Maria Sol Nieto dia hoy izy:
Julio Eduardo sao hiresaka amiko intsony ry zareo a! : D
Valiny tamin'i María Sol Nieto